STIMU ၏ MSc ( Public Health) မဟာဘွဲ့ scholarship ရရှိခဲ့သော
ဒေါက်တာ ကျော်ကျော်ချိုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
STI Myanmar University နှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Bedfordshire ( UK) တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော ပြည်သူကျန်းမာရေး မဟာဘွဲ့ MSc ( Public Health) သင်တန်းအတွက် scholarship ( ပညာသင်ဆု) ရရှိခဲ့သူ စီမံကိန်းညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကျော်ကျော်ချိုနှင့် ယခုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။
မေး - မင်္ဂလာပါဆရာ ၊ ဆရာက scholarship နဲ့ STI Myanmar University မှာ MSc( Public Health) တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဆရာရဲ့ နာမည်နဲ့ ၊ STI ကို ဆရာဘယ်လိုသိခဲ့လဲ ဆိုတာလေး မိတ်ဆက်ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့ ။ ကျွန်တော့်နာမည်က ဒေါက်တာကျော်ကျော်ချိုပါ ။ “Jhpiego Non Profit Organization”မှာ စီမံကိန်းညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ ၂၀၁၅ လောက်မှာ STI ရဲ့ MSc ( Public Health) ကြေငြာတာ face book မှာတွေ့တယ်။ ကျွန်တော် ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆေးကျောင်းပြီးကတည်းက Public Health ကို လုပ်နေပြီမို့ အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ ရှိနေတဲ့ အချိန် ၊ ဒီတော့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိနေတယ်အတွက် public Health ကလည်းတက်ဖို စုံစမ်းနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာပဲ ဒီမှာတက်ဖို့ စီစဉ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်တွေဆီကလည်း တဆင့် ကူညီပေးမှူတွေ ၊ ရှဲတာတွေ နဲ့ information တွေယူပြီး entroll လုပ်တယ် ။ ကျွန်တော်က အဲ့ဒီအချိန်မှာ public Health ကို လုပ်နေတာ (၇) နှစ်လောက်ရှိနေပြီ ။ နာဂစ်ဖြစ်ပြီးကတည်းက NGO မှာ ၀င်လုပ်ရင်း ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ field ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ ရွာတွေနဲ့ ခေါင်တဲ့ ဒေသတွေမှာ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဟောပြောတာ ဆွေးနွေးတာတွေ ၊ ရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ လိုတာတွေ တကယ်လုပ်နေပြီ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း public Health ကို မဟာဘွဲ့ ယူဖို့ စဉ်းစားထား ၊ စီစဉ်ထားတာလည်းရှိတဲ့ အချိန် အခွင့်အရေးနဲ့ အခြေအနေ တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောရမယ်။ STI မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ University of Bedfordshire က တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်တဲ့ မဟာဘွဲ့ရမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် STI ကိုပဲ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
မေး - ဒါဆို MSc ( Pubic Health) ဘွဲ့ကို scholarship လျှောက်ဖို့ စိတ်ကူးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြပေးပါလား။
ဖြေ - ကျွန်တော်က အဲ့ဒီအချိန်မှာ scholarship ကို တောက်လျှောက် လျှောက်ဖို့ လုပ်နေတာပဲ ။ STI မှာ မလျှောက်ဖြစ်ရင် ကျွန်တော် World Bank တို့လိုမျိုး ၊ နိုင်ငံ ခြားကကျောင်းတစ်ခုခုမှောသေချာပေါက်လျှောက်ဖြစ်မှာပဲ ။ တစ်ခုက အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက STI မှာ Private ကျောင်းတွေထဲမှာ သူ့ဖာသာသူနာမည်ရှိနေပြီမို့ စိတ်ဝင်စားလို့ Join လိုက်တာအဆင်ပြေသွားတယ်။ အကြောင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ နေပြီး ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာပဲ တက်တာနဲ့ မဟာဘွဲ့ရမယ်။ ဘွဲ့ကလည်း ခုနကပြောသလို အင်္ဂလန်နိုင်ငံကတိုက်ရိုက်ချီးမြှင့် တဲ့ ဘွဲ့ ဆိုတော့ STI မှာပဲ စကော်လားလျှောက်ခဲ့ တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက STI က 100% အတွက် 25% နဲ့ လေးယောက်ပေးခဲ့တာမှာ ကျွန်တော်လည်း ရခဲ့ပါတယ်။
မေး- အဲ့ဒီတုန်းက Scholarship ရသွားတော့ ဆရာ့ခံစားချက်ကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ပြောရရင် လျှောက်တုန်းကတော့ ကိုယ်က တအားကြီး မျှော်လင့်တာမျိုး မဖြစ်ဘူး။ ရှေ့မှာ လျှောက်ခဲ့တာတွေရှိပေမယ့် ကိုယ့်အလှည့်က မရောက်ခဲ့ဘူး။ အင်တာဗျူးခေါ်တာတွေမရှိပေမယ့် STI မှာကျ ကိုယ့်ကိုရွေးတော့ ပျော်တယ်။ မျှော်လင့်ချက် ရှိလာတယ်။ Motivate ဖြစ်မယ့် Essay တစ်ပုဒ်ရေးရတယ်။ ကျွန်တော်က လည်း ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာလုပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းချပြရေးပြခဲ့ တာပါပဲ ။ Scholarship နဲ့ပဲ ကျွန်တော်က တက်ချင်ခဲ့တာလေ။ မရရင်လည်း No choice ပဲ ။ STI မှာပဲ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်တက်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ ။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အလုပ်ကလည်းရနေပြီး Senior Programer လည်းဖြစ်နေတော့ နိုင်ငံခြားမှာလည်း သွားတက်ဖို့က တော့ မလွယ်တော့ဘူး ။ STI မှာ ရသွားတော့ အရမ်းအဆင်ပြေခဲ့ တယ်။ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ခဲ့လို့ ၀မ်းသာခဲ့ပါတယ်။
မေး- ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ။ STI Myanmar University မှာ စာသင်ကြားမှူပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါဦး ။
ဖြေ- အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က first Batchပေါ့ ၊ သင်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကတော့ ပြောစရာမလိုပါဘူး။ အနည်းအကျဉ်းဆိုသလို လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိခဲ့ရင်တော့ အခု Batch တွေဆို ပိုတောင်ကောင်းသွားမျာပါ။ ပြောရရင်တော့ ဒီမှာ ကျွန်တော် မတက်ခင်ကတည်းက Public Health နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ပြီး အသက်မွေးတာဆိုတော့ ကျောင်းမှာ assignment တွေရေးရတာတို့ ၊ Poster Presentation လုပ်တာတို့ Project တွေရေးတာတို့ကျတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အသုံးဝင်တယ်။ ကျောင်းမှာ သင်တာက ပြန်ပြီး Apply လုပ်လို့ရတယ်။ မာစကာကရသမျှ ဗဟုသုတတွေ ၊ သီအိုရီတွေကလည်း ကျွန်တော့် အလုပ်ထဲမှာပြန် အသုံးဝင်တာပါပဲ ။ ဒီမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဆို public Health မှာ. dissertation လုပ်ရတာ Research တစ်ခုချဉ်းကပ်တာတို့ ပိုပြိးပီပြင်လာတယ်။ ကိုယ်တိုင်တစ်ယောက်တည်း. dissertation လုပ်ရတော့ ပိုပြီး ပီပြင်တယ်။ အသုံးဝင်တယ်။
မေး- ဆရာရဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာ စီမံကိန်းညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် လုပ်ဆောင်မှုတာဝန်ယူမှုပိုင်းလေးတွေ ပြော ပေးပါဆရာ။
ဖြေ- လက်ရှိက မြန်မာနို်င်ငံ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနသင်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ပေါ့ ။ အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ သင်ကြားရေးအဖွဲ့တွေ စွမ်းဆောင်ရေ မြှင့်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းပေးတဲ့ အခါ နေပြည်တော်က ဆရာ/ဆရာမတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ပြည်သူကျန်းမာရေးဌာနတွေ၊ မိခင်နဲ့ ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်နိုင်အောင် လုပ်တာ။ အဲ့ဒီလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက ကောင်းမွန်တဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတတွေရှိမယ်။ တကယ်လည်း စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် ။ လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်လာနိုင်မယ်ပေါ့ ။ ကျွန်တော်တို့ NGO တွေက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အ
ဓိက ပံ့ပိုးပေးတာပေါ့ ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးတယ်။ အကြံဥာဏ်ပေးတယ်ပေါ့ ။
မေး- အခက်အခဲတွေ ၊ လိုအပ်ချက်တွေရော ရှိလားဆရာ ။ အဲ့ဒီလို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရာမှာ။
ဖြေ- ရှိတာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အခက်အခဲလို့ မမြင်ဘူး ။ အခွင့်အရေးလို့ပဲမြင်တယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်တန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေရှိရင် ကျွန်တော်တို့ က ကူညီပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာ ၊ ကျွန်တော်တို့ public Health သမားတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာဆို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ ကိုက်ညီတာမျိုးတွေဖြစ်သင့်တယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင် သူတို့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ သွေဖီပြီး ကိုယ့်ဖာသာတ စ်စင်ထောင်ပြီး လုပ်ရင် အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေက ပြီးသာသွားတယ်။ အကျိုးမရှိဘူး ။ မကျန်ခဲ့ နိုင်ဘူး။ ပိုက်ဆံကုန် ၊ Project ပြီး နိုင်ငံအတွက်ဘာမှမကျန်ဘူးပေါ့ ။ အဲ့ဒီမျိုး။
မေး- ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ Public Health နဲ့ပတ်သက်ပြီး အားနည်းတာက ဘယ်လိုအချက်တွေဖြစ်နိုင်မလဲဆရာ ။
ဖြေ- အားနည်းချက်တွေကတော့ အများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါတွေကို ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေလို့လည်း ဘာမှထူးပြီြး့ဖစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ ဘာတွေဆက်ကြိုးစားနိုင်မလဲ နည်းလမ်းတွေပဲ အမြဲ ကြိုးစားရှာကြံကြရမှာပဲ ။မြန်မာနို်င်ငံမှာ ဆို ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငွေကြေးသုံးစွဲမှု income တွေများလာရင် ၊ ပြည်သူ့တွေစောင့်ရှောက်ဖို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေကြေးကို အထိုက်လျောက်သုံးစွဲနိုင်ရင် Clinical ဖြစ်ဖြစ် Public Health ဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီး တိုးတက်လာမှာပေါ့ ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ကျန်းမာရေးတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးပြောလို့ မရဘူး။ စီးပွားရေ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ အသိပညာတိုးတက်မှ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကလည်း တိုးတက်လာမှာပဲ။ တခြားနိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ နည်းနည်းနိမ့်ကျမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအားကစားဝန်ကြီးဌာန ၊ NGO တွေရော ၊ UN တွေရော ပေါင်းလုပ်နေတာပေါ့ ။ရွေ့နေတာပေါ့ ။ ကိုယ်မျှော်လုပ်တဲ့ အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်သွားဖို့ပဲ လိုတာပေါ့။
မေး - ဆရာက STI မှာမတက်ခင်က ဒီ Public Health လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ ရှိနေတာဆိုတော့ တက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဘာတွေကွားခြားသွားလဲ ၊ ဆရာ့ လုပ်ငန်းမှာ ဘယ်လို Apply လုပ်လို့ရလဲ။
ဖြေ- အဓိကကတော့ Academic Writing ပေါ့။ dissertation လို့ခေါ်တဲ့ အကျယ်တ၀င့်ရေးရတဲ့
Research တွေမှာ ပိုပြီးတော့ စနစ်တကျ ရေးတတ်လာတယ်။ report ပဲရေးရေး ၊ စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာပဲ ရေးရေး ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာတယ်။ ဒီမဟာတန်းမှာက paper တွေဖတ်ရတယ်။ sources တွေဖတ်ရတယ်ဆိုရင် အတော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မဟာတန်းတွေဆိုတော Adult learning နဲ့ပဲသင်ရတယ်။ ဒီတော့ စာတွေဖတ်ရတယ်။ တကယ်စိတ်အားထက်သန်နဲ့ လုပ်ခဲ့ ရတယ်။ ဒီတော့ လိုအပ်တဲ့ information တွေရှာတဲ့ အခါ ပိုပြီးအထောက်အကူပြုလာတယ်လို့ ပြောရပါမယ် ။ ဥပမာ မိခင်နဲ့ကလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီမံကိန်းအဆိုပြု မတိုင်မီအစီအစဉ်တွေချမယ်ဆိုရင် information တွေ ဘယ်မှာရှာရမလဲဆိုတာ ပိုပြီး သိရှိနားလည်လာတာပေါ့ ။ Study တစ်ခုကို ဘယ်လို ချဉ်းကပ်ရမလဲ ၊ research တစ်ခုကို ဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာက ဒီမှာ Qualitative study ဖြစ်နေတော့ အထူးပြောစရာ မလိုဘူး အရမ်းအသုံးဝင်တယ်လို့ ပြောရမယ်။
မေး- ဆရာ့ရဲ့ ရှေ့ဆက်သွားမယ် အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကိုလည်းပြောပြပေးပါဆရာ။
ဖြေ- ကျွန်တော်က NGO လုပ်ငန်းထဲမှာရှိနေတော့ လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်တွေပိုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ပဲ မျှော်လင့်တာပေါ့ ။ Career goal ဆို ရာထူးတိုးတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ ။ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်မှ မဟုတ်ဘူး လူတိုင်းအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးရချင်တာပေါ့ ။ ရဖို့ အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကို ဆုတ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကလည်း STI ကပေးတဲ့ မဟာဘွဲ့လိုမျိုး နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုလောက်တဲ့ မဟာဘွဲ့မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ လိုတာပေါ့ ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် Advanced skills ဖြစ်ဖို့ အမြဲရှာကြံလုပ်ဆောင်နေဖို့ လိုတာပေါ့ ။ ဒါမှလည်း ကိုယ်က အပေါ်တက်လို့ရမယ်။ အခု STIကပေးတဲ့ knowledge တွေ skills တွေက somehow ပေါ့၊ တနည်းတဖုံ အပေါ်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ အသုံးဝင်မယ်လုိ့ ယူဆတာပေါ့။
မေး- ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ၊ STI ကိုရော ဘာများပြောချင်ပါသေးလဲ။
ဖြေ- STI အနေနဲ့တော့ တကယ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ Private University တစ်ခုပါ ။ ကျွန်တော်တို့ လို အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ လူတွေလည်း အလုပ်လုပ်ရင်း ကျောင်းတက်ခွင့်ရနိုင်တာ တကယ်အဆင်ပြေမူတစ်ခုပေါ့ ။ြ့ပီးတော့ တခြား ဂျူနီယာ ကလေးတွေလည်း ဒီလိုမျိုး အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်မှာ အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်တွေချပြီး မဟာဘွဲ့တွေ ယူစေချင်တယ်။ ကျွန်တော့် ၀န်းကျင်မှာ တကယ်လည်း လိုလိုချင်ချင်ရှိနေတဲ့ ကလေးတွေရှိတယ်။ ကျောင်းက အခုလည်း သင်တန်းကြေးတွေ တစ်နှစ်ကို သုံးခေါက်လား ခွဲသွင်းစေတယ်ပေါ့ ။ ကျွန်တော်ကတော့ လေးခေါက်လောက် ပိုက်ဆံကို ဒီထက်ပိုပြီး ခွဲသွင်းခွင့်ရရင် ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ ဘွဲ့ ဆက်တက်ချင်တဲ့ ဆရာဝန်လေးတွေအတွက်လည်း ပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင် မယ်လို့ ထင်တယ်။ တခြားကတော့ အကြံပေးစရာမရှိပါဘူး ။ ကျောင်းက ကျွန်တော်တို့ နှစ်တွေက ပိုပြီးလည်း တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ ။ စာသင်ကြားမူပိုင်းတွေမှာလည်း video conference လိုမျိုး နိုင်ငံခြားကဆရာနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးရတာတွေရှိတယ်လို့ ကြားတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ။ ကျောင်းက လုပ်တဲ့ seminar တွေ ၊ workshop တွေမှာလည်း တက်ချင်တဲ့ သူတွေရှိရင် အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်က တဆင့် အမြဲ sharing လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီထက်မက STI အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။